ncdu: shandisa du kuraira zvakanyanya kutaridzika nema ncurses? | Linux Vakapindwa muropa
ncdu: shandisa du kuraira zvakanyanya kutaridzika nema ncurses?
Kune nzira dzakasiyana siyana uye maturusi ekuongorora nekutevera mashandisiro ediski, senge rakakurumbira du rairo. Nekudaro, iyi sarudzo, inonzi ncdu, iyo yandinokuratidza nhasi inogona kuve yakati wandei uye inoonekera, nekuti inoshandisa raibhurari inozivikanwa yeNecureses kupa chishandiso ichi nemavara-based interface.
ncdu inouya kubva kuNurses Disk Usage, uye yakavakirwa pane online chishandiso kubva du raira. Uye zvakare, inokurumidza uye ichakuratidzira iko iko iko iko kushandisa uko ako mafaera uye madhairekitori ari kugadzira nzvimbo yekuchengetera muLinux. Ruzivo irwo runoratidzwa mumakoramu, pamwe neminda senge megabytes, gigabytes, bar graphs enzvimbo, nezvimwe.
Iyo ncdu package inowanikwa mune distros zvinyorwa seDebian, Ubuntu, Linux Mint uye zvigadzirwa. Nekudaro, iwe hausi kuzowana mune kumwe kugovera seRHEL, CentOS, Fedora, nezvimwe. Muchiitiko ichocho uchafanirwa kugonesa repo kuti ikwanise kuiisa neyako yaunoda package management chishandiso.
Kamwe ncdu yaiswa, ishandise kubva kumagumo Zviri nyore kwazvo. Unofanira kungoimhanya:
Uye izvo zvichatanga track mafaira uye madhairekitori izvo zviri mukati medhairekitori razvino rinoshanda. Kana zvinyorwa zvangoongororwa, ichazopa chimiro chemuti chemafaira uye madhairekitori, pamwe nekushandisa kwavo dhisiki mumhando inoverengwa nevanhu uye ine graphical bar.
Zvakare, kana iko kuongorora kwekutangisa kwapera, unogona zvakare kushandisa akateedzana e zvinhu zvinofambidzana. Semuenzaniso, kana iwe ukadhinda i iwe uchaona ruzivo rwe dhairekitori rawasarudza. Unogona kufamba nemiseve. Iwe unogona zvakare kudzima yakasarudzwa faira kana dhairekitori ne -d wobva wasimbisa na Hongu kana Kwete. Kuti uone rubatsiro rwe ncdu unogona kudzvanya Shift +? uye hwindo reruzivo richaonekwa.
Para buda iyo interface iwe yaunogona kushandisa q.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » ncdu: shandisa du kuraira zvakanyanya kutaridzika nema ncurses?
Zvinonakidza, ini ndaimboshandisa MC kuti ndinyatsoiona ..
Iyo mascots emahara software. Chinyorwa chidiki
Nyaya yaTux, mascot ane mukurumbira mune mahara software